रोजगारीमा जापान जानेले सम्झनुस् है, कात्तिकमा परीक्षा छ ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार रोजगारीमा जापान जानेले सम्झनुस् है, कात्तिकमा परीक्षा छ !
on: १७ भाद्र २०७६, मंगलवार १६:२८ In: पु.समाचारTags: No Comments
काठमाण्डौ । जापान सरकारले औपचारिक रुपमा आप्रवासी कामदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । जापान सरकारले यसअघि नै विभिन्न १४ क्षेत्रमा नेपाललगायत नौ देशबाट विदेशी कामदार भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो । पहिलो चरणमा जापानले केयर गिभरमा कामदार लैजाने तयारी गरेको हो ।
नर्सिङ केयर गिभरमा जापान जान चाहनेले ‘नर्सिङ केयर स्किल इभ्यालुएसन टेस्ट’ अन्तर्गत ६० मिनेटमा ४५ वटा प्रश्नको लिखित उत्तर दिनुपर्नेछ । जसमा ‘फन्डामेल्टल अफ केयर’को १०, ‘मेकानिज्म अफ द माइन्ड एण्ड बडी’ को ६, ‘कम्युनिकेशन स्किल’ को ४, ‘फिजिकल केयर’ को २० र प्रयोगात्मक अभ्यास अन्तर्गत पाँच वटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा कम्प्युटर प्रणाली (सिबिटी) माध्यमबाट दिनुपर्नेछ ।
९ श्रावण २०७७, शुक्रबार ११:२६
९ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०८:४७
९ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०७:१८
१७ भाद्र २०७६, मंगलवार १६:२८